သစ္စာခိုင်သူတို့ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားတခွန်း – Myanmar Media
‘တရားခွင်’ ဆိုပေမယ့် လူများများစားစားမရှိ။ ‘အကျဉ်းနည်းနဲ့ တရားစီရင်သလား။’ ‘လွတ်လပ်တဲ့တရားခွင်မှ ဟုတ်ပါလေစ’လို့ သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။ တရားသူကြီး၊ ရှေ့ဖတ်စာရေးကြီး၊ တရားလို ၊ တရားလိုပြရှေ့နေ (အစိုးရရှေ့နေ) တရားပြိုင်နဲ့ တရားပြိုင်ရှေ့နေအချို့သာရှိတဲ့တရားခွင်တခု။ လူဆယ်ယောက်ပင်မပြည့်။ လူထုရှေ့မှောက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ တရားခွင်လို့ ပြောလို့မရနိုင်တဲ့ ‘ခုံရုံးတော်ကြီး’ပေပဲ။
တရားသူကြီးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်းတရားခွင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ။ တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ တရားပြိုင်ကို အမေးအဖြေစတင်ပါပြီ။
မေး… အမည်- “ဦးဝင်းမြင့်။”
ဆိုတော့ တရားသူကြီးက မျက်နှာခပ်တင်းတင်းနဲ့ လှမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးမှ……
နေရပ်လိပ်စာ – “အခုကျနော်ကို ဘယ်မှာထားမှန်မသိလို့ပါ။”
တရားသူကြီးက ခေတ္တတွေဝေသွားတယ်။ ပြီးမှမျက်နှာကို ချက်ချင်းပြင်လိုက်ပြီး ….
တရားသူကြီးကြီးမျက်နှာဟာ အံ့ဩထိုင်းမှိုင်းသွားဟန် ပါပဲ။ ဟထားတဲ့ပါးစပ်က တော်တော်နဲ့ပြန်မစေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ မျက်မှောင်တချက်ကျုံ့လိုက်ပြီး တရားသူကြီးက.. “သမ္မတအိမ်တော်လို့ထည့်လိုက်ကွာ”…. တဲ့။ အနာဂတ်အတွက် နိမိတ်ဖတ်လိုက်သလိုပါပဲ။
တရားခွင်အတွင်းရှိလူအားလုံး ‘လိပ်ပြာတကောင်တောင်ဟုန်ခတ်သံ’ ပင်ကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ် သွားတယ်။ တယောက်သက်ပြင်းချသံကို တယောက်ကြားရလောက်အောင် ဆိတ်ငြိမ်လို့။ စာနာမှု၊ စိတ်မကောင်းမှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ အံ့အားသင့်မှုတွေနဲ့။ တရားသူကြီး၊ ရှေ့ဖတ်စာရေးကြီး၊ တရားလို ၊တရားပြိုင်ရှေ့နေတွေ အားလုံးဟာ တဒင်္ဂဆွံ့အသွားကြသလိုပါပဲ။ ‘တဖျတ်ဖျတ်’ရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့တိုးညှင်းတဲ့ ကွန်ပြူတာရိုက်တဲ့အသံ ကိုတောင်ကြားနေရတယ်။ ရှေ့ဖတ်စာရေးစိတ်ထဲမှာတော့ “သူ့လိုလူတောင် အိမ်ပိုင်ရာပိုင်ရှိနေသေးတာပဲ သမ္မတ တယောက်က အိမ်ပိုင်မရှိတာကိုဘဲ ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတကောင် မြင်တွေ့လိုက်ရသလို’ စာရိုက်တာကိုခနရပ်ပြီး တအံ့တဩ ငေးကြည့်နေတယ်။
တဒင်္ဂဆွံ့အ၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုတော့ တရားသူကြီးရဲ့ “ ကဲကိုယ်တိုင် သက်သေခံချက်စတင်နိုင်ပါပြီ” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲ ဖြိုခွဲလိုက်တယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းပုံအကြောင်းကို သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်က အစအဆုံးဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပြောပြသလို ထွက်ဆိုသွားခဲ့တယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ တရားခွင်ခုံရုံးဟာ အခုမှပြန်လည်အသက်ဝင်လာတော့တယ်။ အားလုံးကတော့ သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်နားစွင့် နေကြဟန်ပါပဲ။ မျက်လုံးအစုံစုံကတော့ သမ္မတကြီးဆီမှာပဲ စူးစိုက်နေတယ်။
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကတော့ သူ့အပေါ်စွဲချက်တင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်တခုချင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လျှောက်လဲချက်ပေးထွက်ဆိုသွားခဲ့တယ်။ မနက်ဝေလီဝေလင်းမှာ တခါးခေါက်သံကြားလို့ ဖွင့်ကြည့်တော့ စစ်သားတွေ သမ္မတအိမ်တော်ဝင်းထဲ ပြည့်နက်နေပုံ။ မနက် ၅ နာရီလောက်မှာရောက်လာပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရာနောက်လိုက်ပါခဲ့ပုံ။ သမ္မတရုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီးပြောဆိုကြပုံတွေကိုလည်း ကြားနာသူစိတ်မျက်စေ့မှာ ထင်မြင်လာအောင် ပြောသွားခဲ့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်က “သူ့ကို ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြပြီး နုတ်ထွက်ပေးဖို့” ပြောတော့ သမ္မတကြီးက “ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အတွက်နုတ်ထွက်မပေးနိုင်ကြောင်း”။ ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်က “နုတ်ထွက်မပေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်နိုင်တယ် ပြန်စဉ်းစားပါ”လို့ပြောသတဲ့။ သမ္မတကြီးကလည်း “နုတ်ထွက်မပေးနိုင်ဘူး။ အသေပဲခံလိုက်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ဥပဒေနဲ့ အညီလုပ်သင့်တယ်။ အာဏာလည်းမသိမ်းသင့်ကြောင်း”ပြန်ပြောလိုက် တဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ တရားသူကြီးဟာ ‘ဇဝေဇဝါ’အကြည့်နဲ့ မျက်ခုံအစုံကို ပင့်လို့တချက် လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့အကြည့်ထဲမှာတော့ “ဒီအဖြေတွေဟာ ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မယ့်ကြိုးကွင်းကို တချက်တည်း ‘တိကနဲ’ ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အချက်ပဲ”ဆိုတာကို သိနေဟန်ပါပဲ။
(၁၂.၁၀.၂၁)နေ့က တရားခွင်အပြီးမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်သက်သေခံချက်စကားတခွန်းကတော့ မြန်မာမီဒီယာများသာမက ကမ္ဘာ့မီဒီယာများအထိပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တယ်။ ဖုံးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်အရာတခုကို ဖွင့်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ မတရားအာဏာသိမ်းမှုဟာလည်း ဘွားဘွားကြီးပွင့်ထွက်လာပါတော့တယ်။
တရားခွင်ဟာ တိုတောင်းတဲ့အချိန်တခုအတွင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် သမ္မတကြီးရဲ့ ကိုယ်တိုင်သက်သေခံထွက်ဆိုချက်ကတော့ ကမ္ဘာပတ်လို့မပြီးဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေခဲ့တယ်။ စဉ်းစားစရာတွေ၊ သင်္ခန်းစာယူစရာတွေ၊ စိတ်ဓာတ် ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးထားစရာတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာရပုံတွေကအစ နှောင်းလူငယ်တွေကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဆိုတာ ပြတ်သားရဲရတယ်’ဆိုတဲ့အသိကို သင်ကြားပေးနေသလိုပါပဲ။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့ “မဲပေးလိုက်ရတာ တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ”ဆိုတဲ့ ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ ပီတိဖြစ်နေတဲ့ အသံတွေကလည်း လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေမှာ ပျံ့နှံ့ လို့နေတော့တယ်။
သမ္မတကြီးရဲ့သက်သေခံချက်တွေက ‘ဘာတွေကိုပေးခဲ့သလဲ။ ဘာတွေခံစားမိသလဲ’ဆိုတဲ့အချက်ကို လူမှုကွန်ယက်မှာပြောဆိုကြတာတွေကတော့ စုံလို့ပါပဲ။ အများစုကတော့ “စစ်တပ်ဟာ မဲကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာ သမ္မတကြီးရဲ့ ကိုယ်တိုင်သက်သေခံချက်က ချေဖျက်ပြီးဖြစ်တယ်”လို့ဆို ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ “ဥပဒေကြောင်းအရကြည့်ရင် စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုဟာ ရာဇဝတ်မှု မြောက်စေတယ်”လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါအပြင် သမ္မတကြီးကိုစွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ပြစ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် သမ္မတကြီးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရ ပြစ်မှုမမြောက်တာကို တွေ့ရတယ်”လို့ ဆိုကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ကြေညာချက်တခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ‘ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့’လို့ အမည်ရတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဘက်ကနေ ပြည်သူ့ဘက်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့အဖွဲ့ပါ။ အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ “နိုင်ငံတော်သစ္စာဖေါက်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိများကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်း မြန်မာစစ်သားများနှင့် အရာရှိအားလုံးကိုယ်စား မိမိတို့မှကြေညာသည်”လို့ ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေဟာ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ လိုရင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ထွက်ဆိုသွားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ သမ္မတကြီးတယောက်ရဲ့ “အခုကျနော်ကိုဘယ်မှာထားမှန်းမသိတာ”ဆိုတဲ့အဖြေကလည်း လျှို့ဝှက်ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း ကမ္ဘာကိုချပြလိုက်သလို “ကျနော်မှာအိမ်မှမရှိတာ”ဆိုတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအရှိတရားကလည်း အဂတိကင်းစင်ခြင်းကို ဖေါ်ပြလိုက်တာပါပဲ။
သမ္မတကြီးရဲ့ “ခင်ဗျာတို့ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်သင့်တယ်။”ဆိုတဲ့စကားကလည်း သမ္မတတယောက်ရဲ့ ဥပဒေအပေါ်အလေးထားပုံကို ပေါ်လွင်စေသလို စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းဟာလည်း ဥပဒေနဲ့မညီဘူး’ဆိုတာကိုလည်း ထင်ရှားသွားစေခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်း “အာဏာလည်း မသိမ်းသင့်ကြောင်း”ပြောလိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒီစကားကြောင့်လည်း စစ်တပ်ကဥပဒေမဲ့ အာဏာကို အာသာငမ်းငမ်းမက်မက်မောမောလုပ်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုမြောက်သွားစေခဲ့တာကိုလည်း ညွှန်းဆိုရာရောက်ခဲ့တယ်။
အဆုံးမှာတော့ “မင်းတို့လုပ်ချင်ရာလုပ် အသေခံလိုက်မယ်”ဆိုတဲ့စကားတခွန်းကတော့ သမိုင်း မှတ်တမ်းတခုအဖြစ် တင်ကျန်ရစ်ခဲ့တော့မှာပါ။ အဲ့ဒီစကားတခွန်းအရ “နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာ နိုင်ငံကို ရှင်ခြင်းနဲ့လည်း ချစ်တတ်ရသလို သေခြင်းနဲ့လည်း ချစ်တတ်ရတယ်” ဆိုတဲ့ အသိကိုမွေးဖွားပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်အလောင်ကျွမ်းခံပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် အလင်းပြသစ္စာခိုင်မြဲသွားခြင်းကိုတော့ သတိတရမှတ်တမ်းတင် မော်ကွန်းထိုးလိုက်ရပါတော့တယ်။